तिमी अहिले पनि छोडिसकेको लोग्नेसँग भेटघाट गरिरहेकी छौ! :: Setopati
आरती भट्टराई असोज ९
श्रीमानको स्वर्गबासपछि नतालिया एक्लै बस्दैछिन्। दश वर्षअघि श्रीमान गुमाएकी ७२ वर्षीय नतालियाको काँध थोरै झुक्न थालेको भए पनि अनुहार भने झर्झराउँदो छ।
उनलाई सघाउन छोरीहरूले पालो मिलाएका छन्। एकदिन केहीबेरको भलाकुसारीपछि उनको दैनिकी विस्तृत रूपमा सुनाउँदै भनिन्- हिजो माइली छोरीको पालो थियो। दश बजे आएर मेरो पहिलाको लोग्ने र मलाई मेरै गाडीमा राखेर स्टोरमा छोडिदिइन्।
हामीहरूले आफ्ना लागि चाहिने सामान किन्यौ। सामान किनिसकेर कफी खाएपछि छोरीलाई फोन गरें। छोरीले पहिला उसको सौतेनी बाबुलाई सामानसहित ढोकामा पुर्याइदिइन्। अनि मेरा सामानलाई घरभित्र राखिदिएर आफ्नो काममा गइन्। मैले आफ्नो सामान बिस्तारै मिलाएर राखें। धेरै सामान भएकाले अलिक बढी नै गले। आज त उठ्ने बेलामा अलिक गाह्रो भयो।'
उनको दैनिकी सुनिसकेपछि सामान राख्न छोरीले किन नसघाएकी होला? भन्ने लागेर मैले सोधे, 'सामान राखिदिन छोरीलाई किन नभनेको त?'
उनले आफूले गरिरहेका कामलाई सहज रूपमा लिँदै भनिन्,'मेरो सामान, मलाई पो थाहा हुन्छ त कहाँ राख्ने? कुन सामानलाई कहाँ राख्ने र पहिला कुन खाने भन्रे मेरो इच्छा उसलाई कसरी थाहा हुन्छ? ऊ त कहिलेकाहीँ मैले काम परेर बोलाउँदा मात्र आउँछे। मेरो सामान राख्ने ठाउँ उसलाई कसरी थाहा होस्। बिचरा! उसको पनि त काम छ, घर छ, छोराछोरी छन्, मैले पनि त बुझ्नुपर्छ। मलाई चाहिनेभन्दा बढी उसको समय किन लिनुपर्यो। अनि अझै त म आफ्नो काम गर्न सकिरहेकै छु।'
छोरी हुँदाहुँदै यत्रो काम एक्लै किन गरेकी होलिन्? बिचारा बुढाबुढी मान्छे भन्ने भावनाले प्रेरित भएर सोधिएको मेरो प्रश्नको उत्तर उनका कुराले प्रष्टरूपमा दिए।
एक्लै बस्दै आएकी उनका लागि त्यो काम आफ्नै जिम्मेवारी र स्वाभिमानको विषय रहेछ भन्ने बुझ्रन गाह्रो भएन।
आफ्नै छोरीको किन नहोस् आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी समय खर्च नगर्ने उनको व्यवहार प्रशंसा योग्य लाग्यो।
पुरानो लोग्नेलाई भेट्दैछन् र सँगै सपिङ जाँदैछन् भन्ने विषय मेरा लागि अत्यन्तै रोचक र अनौठो हुनपुग्यो। त्यसैले पूर्व लोग्नेसँगको उनको सम्बन्धलाई लिएर मैले उनलाई सोधें, 'तिमी अझैसम्म पनि छोडिसकेको लोग्नेसँग भेटघाट, बोलचाल गरिरहेकी छौ? हाम्रोतिर त्यस्तो हुँदैन।'
मैले सबै कुरा पूरा भनी नसक्दै उनले भनिन्, 'किन भेट्न,बोल्न मिल्दैन र? आखिर हामी १० वर्ष सँगै बसिसकेका हौं। एकले अर्कालाई राम्ररी चिनेका छौं। एक अर्काको सहमतिमा नै छुट्टै बस्ने निर्णय गरेका थियौं। मैले ऊ भन्दा मनपरेको अर्को केटा पाए अनि विवाह गरें। उनको पनि केटी साथी थिइन् तर छोराछोरी भने भएनन्।
करिब पाँच वर्ष अगाडि केटी साथी बितेपछि उनी एक्लै भएका छन्। त्यसपछि मैले छोरीहरूलाई उनलाई सहयोग चाहिएको कुरा गरें। छोरीहरूले आमा तिमी चाहन्छौ भने हामी सहायता गर्न सक्छौं भनेपछि अहिले हामी सँगै स्टोर जाने गरेका छौं। त्यसका अतिरिक्त हामी कहिलेकाहीँ महलतिर पनि जान्छौं। दिनभरि त्यस्तै घुमेर फर्कन्छौं। गत वर्ष उनले मलाई फोन गरेर सोधेका थिए, भोलि मसँग फिल्म हेर्न जान सक्छौं? तिम्रो बर्थडेको उपलक्ष्यमा उतै दिउँसोको खाना पनि खाउँला।'
उनले सहजरूपमा सुनाइरहेका कुराहरूले मलाई भने आफू हुर्किएको ठाउँ, संस्कार र परिवेशको याद ताजा गराइरहेको थियो। ती संवादहरूले हामी बीचको सांस्कारिक भिन्नता प्रष्ट पारिरहेको थियो। उनीसँगको भेट र कुराकानीका प्रत्येक दिन मेरा लागि जिज्ञासापूर्ण हुने गर्थे।
अर्को एक दिन उनले टेबलमा भएका धेरै उपहारका सामानहरू देखाउँदै मलाई भनिन्,'यी सबै मेरा छोरी र नातिनातिनाका लागि क्रिसमसका उपहार हुन्। अब त क्रिसमस आउन पनि त दुई हप्तामात्र बाँकी छ होइन र? मेरा अस्ट्रेलियामा भएका छोरी र नातिका लागि अस्ति नै उपहार पठाइसकें। अर्को हप्तामा उनीहरूले पनि मैले पठाएका उपहारहरू पाउँछन्।'
उनलाई हरपल अक्सिजन चाहिन्छ। यी सबै सामान आफैं बजार गएर रोजेर किनेकी हुन् भन्ने जानेर मैले आश्चर्य मान्दै सोधें, 'यत्रो सामान किन्न त धेरै समय लाग्यो होला? यति लामो अक्सिजनको पाइप लगाएर बजार घुम्न कसरी सम्भव भयो?।'
आँखा अगाडि रहेका त्यतिधेरै सामान देखेपछि र नातिनातिना पनि रहेछन् भन्ने थाहा भएपछि मैले आफू हुर्किएको समाजको परिवेशलाई सम्झें।
आफ्नो देशको संस्कारलाई सम्झें।
यसरी बुढाबुढीहरू आफ्नो घरमा एक्लै नबस्ने। कोही बुढाबुढीहरू एक्लै बसेका छन् भने पनि नातिनातिना उनीहरूको साथी बसी दिने। हजुरबा हजुरआमालाई साथी हुन्छ भनेर प्रायजसो बाबुआमाले आफ्ना नानीहरूलाई बाबुआमाको साथै राखी दिने गरेका छन्। त्यसैले मेरो मनमा उनका नातिनातिना कति जाना होलान् भन्ने प्रश्न उब्जियो र उनलाई सोधिहाले 'तिम्रा कति जना नातिनातिना छन्?'
कुराकानीका सिलसिलामा मैले उनीसँग प्रश्न गरें। यति धेरै नातिनातिना रहेछन्। साथी पनि हुने एउटालाई आफूसँग राख्न मिल्दैन? मेरो जिज्ञासालाई साम्य पार्दै उनले विस्तारै तर जोशका साथ भनिन्,'पहिलो कुरा, मलाई एक्लै स्वतन्त्र भएर बस्न मनपर्छ। मैले भन्दा छोरीले आफ्ना नानीहरू मसँग बस्न पक्कै पठाउँछन् तर तिनका नानीहरू तिनको जिम्मेवारी हो। मैले जसरी उनीहरूलाई हुर्काएँ, पढ्ने वातावरण मिलाइदिएँ र अहिले उनीहरू सक्षम छन्। त्यसरी नै उनीहरूले पनि आफ्ना नानीहरूलाई आफैंले हुर्काउनु पर्छ।
दोस्रो, आफ्ना आमाबाबुसँग बस्न पाउने नानीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो। म उनीहरूको त्यो अधिकार खोस्न चाहन्नँ। मैले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूको अधिकार किन खोस्नु ? म उनीहरूलाई पारिवारिक जमघटमा कहिलेकाहीँ भेटिहाल्छु। उनीहरूको जन्मदिनका दिन बिहानै फोन गरेर ह्यापी बर्थडे भन्छु र उपहार पनि दिने गरेकै छु।
म उनीहरूलाई माया गर्छु तर उनीहरू सधैं मसँग बसेको भने मलाई मन पर्दैन। आदित्यादि कुराहरुले गर्दा म उनीहरूको जिम्मेवारी लिन चाहन्नँ।
कहिलेकाहीँ आउन मन गरे भने सोधेर आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा पनि लिएर आउँछन्, खान्छन् र १,२ घन्टा बसेर जान्छन्। त्यो नै ठीक छ। उनीहरूलाई उनीहरूकै दुनियाँमा रमाउन दिनुपर्छ। उनीहरूले दिन-रात मसँगै बसेर के गर्नु ? केटाकेटी र बुढाबुढीको कुरो पनि मिल्दैन। उनीहरूको जस्तो मोबाइलमा नयाँ-नयाँ गेम खेल्न, चलाउन म जान्दिनँ। त्यसैले म उनीहरूको साथी हुन नसक्ने भएपछि उनीहरू म बुढीको साथी भएर सँगै किन बस्नुपर्छ?'
नतालियाका कुराले म दंग परें।
त्यसैले उनको यो बसाइमा म एक्लोपना मात्र देख्छु। तर उनको भने आफू स्वतन्त्र भएर बाँच्ने संस्कारले आफ्नै नातिनातिनासँगको बसाइभन्दा एक्लोपन नै प्यारो लागेको प्रष्ट देखिन्छ।
कृत्रिम अक्सिजनको सहारामा रहेको जीवनको उत्तरार्ध घरमा एक्लै बसेर पनि सहजरूपमा चलिरहेको छ। स्वतन्त्र भएर एक्लै बस्ने उनको यो निर्णय वास्तवमा उनी बाँचिरहेको परिवेशको, संस्कारको उपज हो। उनी बाँचिरहेको समाजमा घरमा एक्लै छु भनेर डराउनु परेको अवस्था छैन। समाजले केही भन्ला भनेर सोचिरहनु पर्दैन। आत्मनिर्भर भएर बाँच्न पाएकाले कसैसँग केही आश छैन। स्वतन्त्र भएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफूलाई मन लागेको लाउन, खान कसैको अनुमति आवश्यक छैन।
वृद्धभत्ता र पेन्सनका माध्यमबाट प्राप्त हुने मासिक आम्दामीलाई आफैंले स्वतन्त्ररूपमा खर्च गर्न पाएकी छन्। यसका साथसाथै उनको एक्लै बस्ने निर्णयमा राष्ट्रले नागरिकका लागि प्रदान गर्ने सेवा र सुरक्षाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ९, २०७८, १६:०१:००